RASMI: Xiddigii ugu fiicnaa iyo goolkii ugu quruxda badnaa tartanka Champions League oo lagu dhawaaqay – Gool FM
RASMI: Xiddigii ugu fiicnaa iyo goolkii ugu quruxda badnaa tartanka Champions League oo lagu dhawaaqay
Dajiye October 4, 2019
(Yurub) 04 Oct 2019. Waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay magaca xiddiga ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahanka ugu fiican toddobaadka tartanka Champions League, iyo goolka ugu quruxuda badnaa tartankan.
Xiddiga kooxda Bayern Munich ee Serge Gnabry ayaa si rasmi ah loogu caleemo saaray abaal-marinta ciyaaryahanka ugu fiican toddobaadka tartanka Champions League, kaddib bandhigii cajiibka ahaa uu ku hor sameeyay naadiga reer England ee Tottenham Hotspur.
Serge Gnabry ayaa awooday in sida roobki oo kale uu ugu da’o shabaqa kooxda Tottenham Hotspur, wuxuuna 4 gool kaga dhaliyay 35 daqiiqo gudahood qeybta labaad ee ciyaarta, kulankii labaad GROUP B ee tartanka Champions League.
24 jirkan ayaa ku garaacay abaal-marintan xiddigaha kala ah, ciyaaryahanka kooxda Borussia Dortmund ee Achraf Hakimi, Luis Suarez iyo Emmanuel Bonaventure.
Dhinaca kale goolkii ugu quruxda badnaa toddobaadka tartanka Champions League ayaa la bixiyay, wxaana la siiyayLuis Suarez, kaasoo ahaa goolkii koowaad uu weeraryahanka Barca uu ka dhaliyay kooxda Inter.
Imisa ciyaaryahan ayeey ku leeyihiin kooxaha Real Madrid iyo Barcelona liiska xulka Spain uu ku dhawaaqay Tababare Robert Moreno?
RASMI: Xiddigaha u sharraxan abaal-marinta laacibka bisha Sebtember ee Premier League oo la shaaciyay… (Yaa kaga jira kooxdaada?)